Ihe ị ga-eme na Canberra | Akụkọ Njem
Ebe nkiri Canberra
Susana Garcia | | Canberra, Obodo, General
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eche banyere Sydney ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka isi obodo Australia, ha nwere nnukwu mgbagwoju anya, ọ bụkwa na isi obodo ya bụ n'ezie obodo Caberra. Anyị kwenyere na njem adịghị oke oke na isi obodo a, mana anyị na-echekwa obodo mara mma nke enwere ọtụtụ nyocha.
Canberra bụ ebe isi ụlọ ọrụ nke mba ahụ, ma ọ bụkwa obodo na-ekpo ọkụ nke e nwere ọtụtụ ngosipụta ọdịnala na ebe ezumike nke ịnọ ụbọchị. Dịkwa ka obodo niile dị n'Australia, ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye n'ihe banyere ntọala eke.
1 Gaa na Houselọ Omeiwu
2 Kporie ahia ndi ozo
3 Gaa na veranda nka
4 Zuo ike na mpaghara okike nke Canberra
5 Mee ihe omume na ọdọ mmiri kacha atụ obodo
6 Ikga ije n’elu Ugwu Ainslie
7 Mụta banyere akụkọ ihe mere eme nke Australia
Gaa na Houselọ Omeiwu
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị chọrọ ịnụ ụtọ nkọwa niile nke ọdịbendị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke otu mba, ị gaghị echefu ileta ụlọ nke Ndị omeiwu Australia na Canberra. Buildinglọ nke oge a na isi obodo na-enye oge mmeghe nke anyị nwere ike ịmụtakwu ntakịrị banyere usoro ọchịchị onye kwuo uche ya. Na mgbakwunye na mmemme ndị a na-amalitekarị na 14.00: 10.00 pm, e nwere ụfọdụ ndị nduzi n'efu iji hụ ụlọ ahụ dum, ebe enwere ụfọdụ ihe ngosi na veranda ọha na eze. Ọ bụrụ na anyị ga-ahụ isi obodo, ọ dị mkpa ịnụ ụtọ nnọkọ na nzuko omeiwu. Ntuziaka dị na 13.00: 15.00, XNUMX: XNUMX na XNUMX: XNUMX.
Kporie ahia ndi ozo
A maara Ahịa Ochie Debu Ochie Ọ bụ ahịa dị ka ọ dị n'obodo niile, na mpaghara ya kachasị mma na nke oge a. Mgbe nleta ụlọ ọrụ ahụ gasịrị, anyị nwere ike ịbanye ebe izu ike karị, nwere ahịa ebe anyị nwere ike ịchọta ihe niile site na ụlọ nri na ahịa na ụdị ụdị niile. Nleta ọchị, nke enwere ike ime na Sọnde site na 10.00: 14.00 ruo XNUMX: XNUMX. O doro anya na ọ bụ nleta na-atọ ọchị nke anyị nwere ike ịga zụọ ahịa ma nweta ihe na-atọ ụtọ, karịrị ihe ncheta ndị a na-ahụkarị.
Gaa na veranda nka
Sydney nwere ike ịbụ onye ọzọ na-eme njem nleta, mana Canberra bụ n'ezie ebe ọ ga-abụ maka ndị hụrụ nka na omenaala n'anya. N'ime isi obodo a enwere ike ịchọta ọtụtụ veranda, site na nke nta ruo na nke nta anyị nwere ike ịchọta n'akụkụ dị iche iche nke obodo ahụ. Otu n'ime nleta dị mkpa bụ na National Gallery nke Australia, ebe mkpokọta kachasị mkpa nke mba niile dị. Anyị ga-ahụ ụfọdụ ngosipụta nke nka Australia na nke ụmụ amaala. Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnụ ụtọ nchọta nke obere veranda ebe anyị nwere ike itinye onwe anyị na nka kachasị ọhụụ na nke ugbu a nke obodo ahụ.
Zuo ike na mpaghara okike nke Canberra
Australia bụ mba dị nso na ọdịdị ya, yabụ nwere nnukwu oghere dị na mbara nke ịnụ ụtọ ya. Na Arboretum nke Mba Ọ bụ ebe na-adọrọ mmasị, ebe anyị nwere ike ịchọta ebe ọmụma dị n'oké ọhịa Australia, maka ndị hụrụ okike n'anya. Enwere ihe ruru osisi 48.000 na ebe a, enwekwara ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma iji hụ akụkụ ndị ọzọ nke Canberra ma zuo ike na njem ahụ.
Mee ihe omume na ọdọ mmiri kacha atụ obodo
El Ọdọ mmiri Burley Griffin Ọ bụ ọdọ nke na-eju anya maka otu o si maa mma ma n’ihi kilomita 35 nke gburugburu. Ma karịa ihe niile ọ na-adọta uche n'ihi na ọ bụ ọdọ mmiri ke Canberra, ebe a na-arụ ụdị ọrụ mmiri niile. Ọ bụ ebe ọzọ nke magburu onwe ya ebe ị nwere ike ịnọ ụbọchị, na-agagharị n'ikpere mmiri ya, ma ọ bụ kayak ma ọ bụ ikuku na-efegharị na ọdọ mmiri.
Ikga ije n’elu Ugwu Ainslie
Dị ka anyị na-ekwu, n'Australia ha na okike nwere njikọ chiri anya, ọ bụ ya mere anyị ji achọta ebe mara mma mara mma nke dịdebere obodo ahụ. Maka ndị na-enweghị ike iguzo na asphalt ogologo oge, ije ije n'ugwu Ainslie nwere ike ịba uru. Na echiche nke ugwu a Ọ na-enye ọmarịcha echiche banyere obodo ahụ na ụfọdụ ebe ngosi kachasị dị na ya, dịka Ncheta Ncheta nke Australia ma ọ bụ Parliamentlọ Ndị Omeiwu. Goodzọ dị mma iji nwee ọ freshụ ikuku dị mma na gburugburu obodo mepere emepe, yana n'ezie obere egwuregwu. Trazọ ụkwụ ndị ahụ akara nke ọma, na ọtụtụ enwere ike iji ụkwụ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe chọọ.
Mụta banyere akụkọ ihe mere eme nke Australia
Maka ndị na-enweghị ike ịgafe obodo ma ọ bụ obodo na-enweghị ịnwa ịmara ụfọdụ akụkọ ntolite ya, enwere ebe dị ka Ememe Ncheta nke Australia. Ọ bụ ihe ncheta nke edere akụkọ ihe mere eme nke ndị agha Australia site n'oge ọchịchị ruo n'oge. Yabụ nke a bụ ebe kachasị mma maka ndị nwere mmasị ịmara akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ebe nkiri Canberra
Ebe obibi Yusupov, ebe e gburu Rasputin